Fandefasana Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ny zoma lasa teo, ny fivarotana ny Apple Watch dia natomboka tany Espana, Mexico, Italia ary firenena maro hafa izay nantsoina hoe onja faharoa amin'ny fanombohana ny famantaranandron'i Apple. Amin'ity fotoana ity dia tsy misy olana rehefa mividy famantaranandro mandritra ny fotoana voalohany amin'ny fivarotana ny famantaranandro, fa raha ny fandefasana dia fohy tao anatin'ny 1 andro ho an'ny maodely 42mm. Etsy ankilany, ho an'ny maodely 38 mm, dia mbola misy io fotoana fandefasana fohy io ho an'ny ankamaroan'ny maodely Watch, nefa tsy manatona ireo maodely Edition izay somary mitaredretra kely kokoa.
Izany dia manondro mazava tsara fa ny maodely 42mm, na inona na inona ny maodelin'ny Space Gray na Silver, no tena tadiavin'ireo mpampiasa nividy ilay famantaranandro. Tamin'io andro fandefasana io ihany dia azo inoana fa ny tranokala ho an'ny mpampiasa sasany dia miadana ny mandefa na somary miadana, fa amin'ny ankapobeny dia milamina daholo ny zava-drehetra.
Raha iray amin'ireo te haka Apple Watch ianao ary tsy manana Apple Store eo akaiky eo hametrahana ny baiko ary mankany amin'ny magazay hitady azy, Eny, ilaina ny manana faharetana kely. Na izany na tsy izany dia tsy mitovy amin'ny toe-javatra hitany tamin'ny fandefasana andiany voalohany izahay, izay niandry ny fandefasana 2 - 3 herinandro.
Amin'izao fotoana izao dia mbola zara raha misy ny tahiry Apple Watch hividy azy io amin'ny famandrihana any amin'ny magazay, saingy azo antoka fa afaka andro vitsivitsy dia hiorina izy io ary tsy ho ela dia azo atao koa ny mividy eny amin'ny magazay mivantana, raha miresaka momba ny Sport sy Watch modely, ho an'ny Fanontana dia taranja hafa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple Watch 42mm azo alefa ao anatin'ny 1 - 2 herinandro
Rahampitso dia manomboka ny fandefasana ny Beats 1 ary hiady hevitra amin'i Eminem